एक कठा जमिन र ३ तोला सुन मात्रै भएका प्रचण्डले छोरीलाई कसरि दिया १५ करोडको घर उपहार - Experience Best News from Nepal
एक कठा जमिन र ३ तोला सुन मात्रै भएका प्रचण्डले छोरीलाई कसरि दिया १५ करोडको घर उपहार
प्रकाशित मिति : बिहिबार, जेष्ठ १०, २०७५
सम्पत्ति विवरणमा चितवनमा एक कट्टा जमिन र तीन तोला सुन मात्र भएका भनिएका कम्युनिस्ट नेता प्रचण्डले आफ्ना दुई छोरीहरू रेणु र गङ्गालाई आफ्नै निवास नजिक घर बनाएर लगेका छन् । छोरा प्रकाशको निधनपछि श्रीमती सीता दाहाल विरामी परिरहने भएपछि प्रचण्डले सीताको रेखदेखलाई पनि सहज हुने गरि छोरीहरुलाई आफू नजिक लगेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।
लाजिम्पाटको निवास दाहाल परिवारको लागि नफापेको निष्कर्षपछि ठेकेदार शारदा अधिकारीको नाममा बनाइएको खुमलटारस्थित घरमा बसोवास गर्न पुगेका प्रचण्डले आफ्ना दुवै छोरीलाई आफ्नै निवास नजिक लगेका हुन्। प्रचण्डले आफ्नै नजिकै दुईवटा घर बनाइदिएर छोरीहरुलाई गत वैशाखमा गृहप्रवेश समेत गराएका छन् । तर नयाँ घरको बनाउने सम्पतिको स्रोत भने प्रष्ट छैन।
वैशाखमा घर सर्ने दुईवटा मात्र साइत रहेको र त्यसपछि एकैपटक असोजमा मात्र साइत रहेको थाहा पाएपछि छोरीहरु वैशाख २९ को साइतमा घर सरेका थिए। घरको आन्तरिक काम सकिन बाँकी रहेपनि गत वैशाख २९ गते सनातनी धार्मिक विधिअनुरूप पूजा गरी दुई छोरीहरुलाई गृहप्रवेश गराइएको थियो । धार्मिक विधी अनुसार घरपूजा गर्ने कार्यमा प्रचण्डले छोरीहरुलाई सघाएका थिए।
सशस्त्र द्धन्दका समयमा सबैभन्दा बढी हिन्दु सनातनी धर्म संस्कृती विरुद्ध आक्रमण गर्न लगाएका प्रचण्डले देशलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउन सर्वाधिक मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इसाई धर्मप्रति विशेष निकटता दर्शाउने प्रचण्डले छोरीहरूलाई गृहप्रवेश गराउँदा भने सनातन विधिअनुरूप पुरोहित राखेर पूजा गर्न लगाएको विषय नवगठित नेकपा भित्र चर्चामा छ। भन्दै हाम्राकुराले लेखेको छ !
यस्तै अध्यक्ष दाहाल आफू भने एकजना ठेकेदार शारदा अधिकारीको घरमा निःशुल्क बस्दै आएका छन् । ठेकेदार अधिकारी कलंकी नागढुंगाको सडक नबनाए राज्यलाई ठगी गर्दै आएका ठेकेदार हुन् । झण्डै १५ करोडको लागतमा बनेको घरको आलोचना सुरु भएको छ । झण्डै १५ वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई बनाइदिएको यो घरको आफ्नै कार्यकर्ताहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । भन्दै
नेपाली सेनाको सक्रियता : फास्ट ट्रयाक निर्माणमा तीब्रता !
मोबाइल स्वीच अफ गरेर डा. केसी इलाम पुगे, त्यहीँबाट सोह्रौँ अनशन सुरु गर्ने
निर्मला हत्या प्रकरण बारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो !! भिडियो सहित
निर्वाचनको लागि सविंधान संसोधन अपरिहार्य : नेता त्रिपाठि